नेपाल आज | कहाँ–कहाँ ख्रिष्टियन धर्मकाे प्रचार गर्न पाइन्छ? (भिडियाेसहित)
पछिल्लाे समय ख्रिष्टियन समुदायमाथि धर्म प्रचार गरेकाे र सहयाेगकाे नाममा बाइबल बडेकाे लगायत विभिन्न आराेपहरू लागिरहेका छन्। विना दर्ता चर्च कसरी चलिरहेका छन्। इसाइ समुदायकाे वर्तमान आवस्था कस्ताे छ लगायतकाे विषयमा पूरानाे बानेश्वरमा रहेकाे अगापे चर्चका पाष्टर तथा अधिवक्ता बुद्ध घिसिङ्गसँग कुराकानी गरिएकाे छ।
पाष्टर तथा अधिवक्ता घिसिङले राज्य र प्रशासन संविधानले सुनिश्चित गरेको व्यक्तिको मौलिक हक र कानुनी अधिकारप्रति संवेदनशील नभएकाे बताए।
उनले भने,' अरू देशमा सबै धर्मालम्बीलाई समान व्यवहार र सम्मान गरिरहँदा हाम्रो देशमा राज्य, प्रहरी प्रशासन र नेता तथा बुद्धिजीविले इसाई समुदायमाथि देखाएको द्धेष, इवी र असहिष्णुताले इसाई अल्पसंख्यक धार्मिक समुदायको भावनामा गहिरो चोट पुगेको छ।'
उनले ‘प्रहरी मेरो साथी’ भन्ने नेपाल प्रहरीको नारा देखावटी मात्र भएको र पुख्र्यौलीदेखि मानेको आफ्नो धर्म, संस्कृति, आस्था र विश्वास गर्दै आएको अभ्यासमा कुठाराघात गरेको बताए। उनले भने,'यसले अल्पसंख्यक इसाई समुदायले आफूहरू पनि यो देशका नागरिक हौं भन्नेमा संकोच मान्नुपर्ने स्थिति उत्पन्न गरेको छ।'
उनले चर्च सञ्चालन सम्बन्धि सरकारले कानुन नबनाउँदा समस्या भइरहेकाे बताए।
२४ घण्टामा थप १ हजार २ सय ७ जनामा कोरोना संक्रमण पुष्टि
रुपन्देहीमा वाढिको कहरः १७ घर वगे, दर्जनौ परिवार विस्थापित
छारे रोगको लक्षण देखिएका कोरोना संक्रमित शैनिकको मृत्यु
डा. केसीको समर्थनमा प्रदर्शन गर्ने युवा पक्राउ